यो ट्रेन पुल एक अविश्वसनीय वास्तुकला आश्चर्य छ. तपाईं छ चूना arches पाँच उच्च स्तम्भहरु मा आराम देख्न सक्नुहुन्छ. पुल को सीधा जान्छ 216 मीटर लामो Landwasser टनेल.
यो भव्य स्कटिश ल्यान्डमार्क नदी पार निस्कने Queensferry मा, एडिनबर्ग को बस पश्चिम.
यो केवल देखि 409 मीटर लामो, पैदल र cyclists लागि पुल को एक खण्ड पनि त्यहाँ. त्यहाँ रेल ट्रयाक प्रत्येक पक्षमा कसैको. मानिसहरू बीच बार मा 'प्रेम padlocks' राख्दै थालेका रेल र पैदल क्षेत्रमा देखि 2008.
#एडिनबर्ग #Luechriver #Rhineriver #viaduct longtrainjourneys SwissAlps रेल यात्रा travelcologne